May 2018 – Trend.com.mm
တစ်ခါတစ်လေကြရင် မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု စုပြုံပြီးရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ကြည်နေချိန်မှာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် စိတ်အလိုမကျချိန် ပြဿနာတွေပါထပ်ဖြစ်လာရင် လူဟာ တွေးမိတွေးရာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ဆိုး​ဝါးတဲ့နေ့တွေကြုံလာတဲ့အခါ ဒါလေးတွေကိုအမှတ်ရလိုက်ပါ….
Posted on May 31, 2018 May 31, 2018 by Wint
ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံး Netflix Variety Show ဖြစ်တဲ့ Busted! စီးရီးကတော့ ဒုတိယseason အနေနဲ့ ပြန်လည်ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on Season2အနေနဲ့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Netflix Show ”Busted!”
Disney ကတော့ Maleficent2ကို စတင်ရိုက်ကူးနေပါပြီ။ ထွက်ရှိလာမယ့်ရက်ကိုတော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး။ မေလ (၂၉)ရက်နေ့က » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on နောက်ထပ်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ Maleficent2ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာ
ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့ သဘာဝဆန်တဲ့မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက မိန်းကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာအတော်ကြာပါပြီ။အထူးသဖြင့် နာမည်ကျော် မင်းသမီးချော Song Hye Kyo » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on သဘာဝဆန်တဲ့မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်လွှမ်းမိုးစေခဲ့တဲ့သူတို့သုံးယောက်ရဲ့  မိတ်ကပ်ခြယ်သမှုအကြောင်း
Hello ကေပေါ့ပ်ပရိသတ်ကြီးရေ…မေလ ၃၀ရက်နေ့က နာမည်ကျော်အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်လောကနဲ့လည်းမစိမ်းသူလေးYoona ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အသက် ၂၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on တရုတ်နိုင်ငံပရိသတ်တွေက Yoona ရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် သူမရဲ့နာမည်နဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့
လူတွေရဲ့နေထိုင်ရာဝန်းကျင်မှာ ပတ်သတ်ဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် စိတ်အနှောင့်ယှက်ပဲပေးနေတယ်ဆိုရင် သာယာပျော်မွေ့စရာမရှိတော့ပါဘူး။ အပြန်လှည်ရိုင်းပင်းကူညီ ၊ စိတ်ရင်းစေတနာမှန်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့လူတွေရှိမှသာ နေရတာပျော်ဖို့ကောင်းမှာပေါ့။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on အခုတည်းကရှောင်ထားသင့်တဲ့ သင့်အတွက်ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်တဲ့လူများ
ခပ်မိုက်မိုက်ဘော်ဒီလေးလိုချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းပါပဲနော်။ဒါပေမဲ့ အလုပ်တွေမအားတာရယ်၊ Gym မှာသွားကစားဖို့အချိန်မပေးနိုင်တာရယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လှလှလေးရဖို့က လက်တစ်ကမ်း အကွာမှာလိုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းလေးကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ၀မ်းဗိုက်သားလေးပြားချပ်ဖို့နဲ့ သေးသွယ်တဲ့ခါးလေးရဖို့ကုလားထိုင်တစ်လုံးသာလိုပါတယ်တဲ့။ ကုလားထိုင်မှာထိုင်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာဖြစ်လို့တီဗီကြည့်ရင်းနဲ့ပဲလုပ်မလား၊ခဏတဖြုတ်အညောင်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ပြားချပ်တဲ့ဝမ်းဗိုက်နဲ့သေးသွယ်တဲ့ခါးလေးရဖို့ ထိုင်ခုံတစ်လုံးသာလို…
အခုလတ်တလော နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေသဘောကျနှစ်သက်နေတဲ့”I’m NotaRobot” မင်းသားချော Yoo Seung Ho အကြောင်းလေး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲ “I’m NotaRobot” မင်းသားချော Yoo Seung Ho အကြောင်းတစေ့တစောင်း
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်နဲ့ချစ်ခင်စုံမက်ကြတဲ့အခါ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Relationship တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ရေရှည်ခိုင်မြဲပြီးသံယောဇဉ်ကြိုးချည်နှောင် ဖို့အတွက် အဓိကအခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ကဘယ်တော့မှဟောင်းမသွားမယ့်အချစ်ပါ။ဟောင်းမသွားမယ့်အချစ်လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကလည်း တစ်ချို့တွေက ကိုယ့်ချစ်သူထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာလွန်တာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on အချစ်စစ်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆို သူတို့စုံတွဲလေးတွေကိုလည်းချန်ထားလို့မရ…